Tuliguuleed oo laga dhagaxdhigey Dugsiga Hoyga Agoonta – Radio Daljir
Tuliguuleed oo laga dhagaxdhigey Dugsiga Hoyga Agoonta
Oktoobar 24, 2019 3:48 g 0
Booqashadii Madaxweyne Mustaf Cagjar kabacdi, waxaa maanta Tuliguuleed la dhagaxdhigey Dugsiga Hoyga Agoonta. Waa dugsi wax lagu xannaaneyn doono waxna lagu bari doono carruurtii ku agoomowday colaadihii dhexmaray Soomaalida iyo Oramada.
Dugsiga ayaa waxaa dhagaxdhigay qurbojoogta Tuliguuleed.
Tuliguuleed ayaa Jigjiga u jirta 30 KM, dhanka galbeedkana waxaa ka xiga Jinacsani, waana magaalo beeraley ah, kana mid ah magalooyinka ugu waxsoosaarka badan DDS. Laakiin Tuli Guuleed waxaa dhowrkii sano ee ugu danbeeyey weerar ku ahaa qowmiyadda Oramada, ayada oo dad badan ku naf waayeen, kuwo badanna laga qaxiyey badanaa degmooyinka hoostaga Tuliguuleed.
Qaxootiga ugu badan ee laga barakiciyey degmooyinka hoosyimaada Tuliguuleed ayaan ayagu weli helin hoy ay ku hoydaan, kuna dhex rafaadsan degmada Tuliguuleed, meesha barakacayaasha magaalooyinka Balbaleyti iyo Jinacsani oo hore maleeshiyaadka QEEROO ee Oramadu ay Soomaalida ugala wareegeen ay qaxootiga ku yihiin xerada weyn ee qaxootiga ee Qalooji, kuna taal bartamaha Jigjiga iyo Harar.
Waxaa hadda socda heshiis la dhexdhigayo labada dowlad deegaan ee Soomaalida iyo Canfarta, waxaan rajo laga qabaa in heshiis waara uu dhexmaro Soomaalida iyo Oramada, heshiisna laga gaaro dhulka qaniga ah ee Oramadu ay Soomaalida ka barakicisey.
Deni oo kulan kula qaatay qasriga Madaxtooyada Puntland ee Garoowe mas’uuliyiin ka socday shirkadda CCECC (Daawo)
Wasiiro Cusub oo lagu dhaariyeey Madaxtooyada Garoowe (Daawo)